Warbixinta toddobaadlaha ah ee coronavirus-ka ee Sioux City Community School District ayaa muujineys | KWIT
Somali News 01.08.21
Guddoomiyaha Gobolka Iowa Kim Reynolds wuxuu soo afjaray xaddidaaddii isboortiga iyo isu imaatinnada madaddaalada maalin ay gobolku diiwaangelisay 59 dhimasho dheeraad ah oo uu sababay cudurka coronavirus, oo ay ku jirto hal dhimasho oo kale oo ka dhacday Gobolka Woodbury. Waxaa jiray 172 dhimasho sida laga soo xigtay Caafimaadka Degmada Siouxland tan iyo bilowgii cudurka faafa.
Guddoomiyaha gobolka Nebraska Pete Ricketts ayaa sheegay in isbitaallada la seexinayo ee gobolka ay ka hooseeyeen 500 markii ugu horreysay tan iyo bishii Oktoobar.
Shir jaraa’id oo uu saaka qabtay Ricketts wuxuu ku sheegay in dadku wali u baahan yihiin inay feejignaadaan.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in 30% sariiraha isbitaalada gobolka iyo ICU la heli karo iyo 74% hawo-mareenada.
Qaar ka mid ah cilmi baarista cusub ee ka socota Jaamacadda Iowa State University ayaa darsay faafitaanka cudurka coronavirus iyadoo rajo laga qabo in la saadaaliyo halka ay ugu badan tahay.
Warbixinta ayaa baareysay dhimashada waxayna ogaatay inay kuxiranyihiin inbadan oo kadis ah kulamada dadweynaha, iyo kuwa yar yar, kooxaha xakamaynta badan.